सुप सेवन स्वास्थ्यको लागी कति आवश्यक ? - Kamana News
सुप सेवन स्वास्थ्यको लागी कति आवश्यक ?
हामीले हरेक दिन धेरै किसिमका खानेकुरा खाने गछौँ । तर के हामीले खाना खानुपूर्व कहिल्यै सोचेका छौँ कुन खानेकुरा स्वस्थ्यका लागि कति उपयुक्त भनेर । प्राय जसो हामीहरुले अगाडी पाएको र मुखलाई मिठो हुने कुरा खाईहाल्छौँ । तर, त्यसले स्वास्थ्यलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेकुरासँग प्रवाह नै गर्दैनौँ । यसले गर्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्या आउँछन् । हामिले आज सबै किसिमका खानेकुराको बारेमा होईन्, सुप तथा झोलिलो कुराको बारेमा चर्चा गर्न गईरहेका छौँ । स्वास्थको लागि झोलिको खानेकुरा निकै नै फाईदाजनक हुन्छ । हामीले सुप भन्नासाथ सामान्यतया बिरामीहरुले खाने होला भन्ने सोच्छौँ । बिरामीको लागी मात्र नभई स्वस्थ्य मानिसको लागी पनि सुप अत्यन्त आवश्यक छ । सधैँ जस्तो हामीले फ्राइड, चिल्लो, पिरो, ठोस पदार्थको प्रयोग हाम्रो शरिरको लागी प्रदान गर्ने गर्छौँ । कतिपय मानिसहरुले त पानी तथा झोल भएको खानेकुराको प्रयोग न्युन गरेका हुन्छन् जसले गर्दा शरीरमा तरलको मात्रा कमी हुन जान्छ र स्वास्थ्य समस्या सुरु हुन थाल्छ । यो समस्या जाडो मौसमा बढेर जान्छ । हाम्रो शरिरको तौल अनुसार हामीले कति मात्रामा पानी पिउने भनेर निश्चित हुन्छ तर अरुले यती पानी पिउनुपर्छ भन्ने कुरा सुनेर बढी पानी पिउदा पनि शरिरलाई हानी पुग्ने विभिन्न रिसर्चले देखाएको छ ।
बजारमा पाईने विभिन्न खानेकुराको परिकारमध्ये सुप पनि एक विशेष र स्वास्थ्यलाई फाईदा पुग्ने खानेकुरा हो । सुप भन्नाले झोलिलो पदार्थ भन्ने बुझिन्छ । प्राय हामी ठोस कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ र धेरै मात्रामा दैनिकी रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छौ । प्राय हाम्रो थालमा हुने दाल, भात, तरकारी, सागसब्जी आदी मात्र शरिरलाई आवश्यक नभई तरल पदार्थ पनि उतिकै आवश्यक रहेको हुन्छ । हाम्रो शरिरमा दुईटै कुराको शही मात्रामा पुगेमात्र हामी स्वास्थ्य रहन सक्छौँ । हाम्रो शरिरमा ६० प्रतिशत पानी अथवा तरल पदार्थको मात्रा उपलब्ध रहेको हुन्छ । शरिरको विकासको लागी मात्र नभई मस्तिष्कको स्वास्थ्यको लागी पनि पानीको मात्रा आवश्यक हुन्छ । पानीले हाम्रो शरिरको सबै भागमा पानीद्धारा अक्सिजन पुर्याउने काममा सहयोग गर्छ । त्यसैले तरल पदर्थको प्रयोग हाम्रो शरिरलाई चाहिने जति सेवन गर्न आवश्यक हुन्छ । सुप एक राम्रो बिकल्प हो त्यसले सुपको प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ ।
घरमै स्वादिष्ट सुप कसरी बनाउँनेः
शुप घरमै भएको सामाग्रीबाट सजिलै तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ । सुप बनाउन थोरै कुराको आवश्यक हुन्छ । विभिन्न तराकरी जस्तै च्याउ, टमाटर, गाजर, लौका, आदीको सुप बन्छ भने चिकेनको सुप तथा मटनको सुप पनि धेरैले मन पराउने गर्छन । यस बाहेका अन्य सुपको परिकार भनेको चाउचाउको सुप पनि धेरैले खाने गरिन्छ । यसरिनै क्वाटीको सुप, ब्रोकाउलीको सुप पनि सजिलै बनाउन सकिन्छ । विभिन्न प्रकारकोृ दालको पनि सुप बन्ने गर्छ जुन शरिरको आवशय तत्व बोकेको हुन्छ । सुपको सेवनले हाम्रो पाचन शक्ति पनि बलियो हुन्छ । यदि खाना ब्यालेन्स मिलाएर खाने हो भने सर्वप्रथम स्टाटरमा सुपको प्रयोग हुन्छ अनि मात्र अरु खानाको । एक छाक आफूलाई मन परेको सुप खान सकिन्छ ।
शरिर मोटो भएर हैरान भएको व्यक्तिले पनि सुपको सेवन गर्ने हो भने शरिरमा थुप्रेको नचाहिने तौल घटाउन ठूलो मद्धत पुग्न सक्छ । कम क्यालोरी मात्र भएको सुपको प्रयोगले विभिन्न फाईदा हुन्छ ।
हाम्रो परम्परा कालदेखी नै सुपको प्रयोग गरिदै आएको छ । चिकित्सकहरुले पनि झोलिलो कुराको सेवन गर्ने सल्लाह दिने गर्छन् । केही समय अगाडी सुरु भएको कोरानो कालदेखी पनि बेसार पानी, ज्वानोको झोल, तुलसी पानी लगायत काढा जस्तो कुराको प्रयोग बढाउन थालेको छ । सुप सजिलै पाचन हुन्छ । बिरामी भएको बेला पनि चिकित्सकले पनि सुप खाने सल्लाह दिने गर्छन् । तसर्थःसुपको ताजा बनेको सुपको सेवन गर िस्वास्थ्यको ख्याल राखौँ ।
शुक्रवार, माघ १६ २०७७१२:५७:४३